Ao Aostralia, Telo Minitra Isaky Ny Mandeha Hianarana Ny Fiteny Gumbaynggir · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraFirst Languages Australia
Voadika ny 25 Avrily 2016 3:58 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, русский, English, Français, Esperanto , English
Navoaka voalohany tao amin'ny First Languages Australia ity lahatsoratra ity, tamin'ny Warra : Building teams, building resources. (Manangana ekipa, manangana loharanon-karena)
Tenenina mahazatra ao amin'ny faritra amorontsiraka avaratry ny firenena Aostraliana, fantatra ankehitriny hoe New South Wales (NSW), ny fiteny Gumbaynggirr.
Afaka mihaino ny fiteny ireo mponina manerana ilay faritra, tsotra fotsiny, amin'ny alalan'ny fandraisana ny onjam-peo marainan'ny ABC Coffs Coast. Isaky ny Alarobia, mampianatra teny sy fehezanteny ho an'ireo mpihaino sy ho an'ilay mpanolotra ny fandaharana, Fiona Poole, i Gary Williams, mpampianatra fiteny Gumbaynggirr ao amin'ny Fikambanan'ny Teny Teratany sy ny Kolontsaina Muurrbay, ivon-toerana iray ao amin'ny faritra miasa ho fanohanana ireo fitenin'ireo vondrom-piarahamonina Teratany ao NSW. Mandeha amin'ny 7:30 maraina aorian'ny fandefasana ireo vaovao ilay ampaham-pandaharana maharitra 3 minitra.
Ho an'ireo izay tsy afaka hanaraka isaky ny herinandro, natao ho azo alaina ao amin'ny tambajotran'ny bilaogy ABC eo an-toerana ireo teny sy fehezanteny vaovao. Misy rohy ny bilaogy mankany amin'ny feo avy amin'i Williams miteny ny fehezanteny sy ny fandikàna azy. Ho an'ireo izay maniry ny hanana ilay ampahany feno telo ministra isaky ny mandeha, dia tsy maintsy manaraka ny fandaharana amin'ny onjam-peo, satria izay zarain'ny bilaogy dia ny santionany kely fotsiny avy amin'ny fandaharana.
Tsy ampianarina fotsiny ao amin'ny onjam-peo ilay fiteny. Na dia misy aza ireo olona vitsivitsy nitmbo tao anatin'ilay fiteny, omena any an-tsekoly ihany koa ireo lesona Gumbaynggirr ary ireo fandaharana ho an'ny vondrom-piarahamonina ataon'ireo mpampianatra matianina toa an'i Michael Jarret, izay voarakitra ao anaty horonantsary ABC OPEN nalefa etsy ambony ny fanantenany mikasika ny fiteniny.
Nanaporofo fomba iray mahomby hampiroboroboana ny Gumbaynggir ny fiarahana miasa amin'ny onjam-peo sy ny asan'ny Fikambanan'ny Teny Teratany sy ny Kolontsaina Muurrbay manerana ny faritra, na izany ho an'ireo mpihaino ny onjam-peo, na ho an'ireo mpampiasa aterineto.